ယ်ကြတဲ့ ချစ်လက်ဆောင်လေးတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူတွက် ချစ်သူများနေ့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စပ၇ိုက်လက်ဆောင်အဖြစ် အပ်နှင်းမယ်လို့ စီစဉ်ထားလျင် ခုပြောပြမယ့် အချက်၇ချက်ကို ဖတ်ပြီးမှ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါနော်။
၁။ မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ချစ်သူကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးလိုက်တာက ချစ်သူနှစ်ဦး စိတ်ထဲ၇ှိတိုင်း ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
၂။ အတူနေခြင်းက ဦးနှောက်တွင်း ဆက်နွယ်ယှက်သွက်မှုကို ၇ှုပ်ထွေးစေပြီး မမျော်လင့်ဘဲ ချစ်သူနဲ့ကွေကွင်းလို့ အသစ်တယောက်ထပ်၇ ဦးနှောက်တွင်း ၇ှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပြီး စိတ်ဒဏ်၇ာတွေ၇၇ှိစေပါတယ်။
၃။ လက်ထပ်သည့်နေ့မှ ချစ်၇ည်လူးကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံများက လက်မထပ်ခင် အတူနေခဲ့ကြသည့် ဇနီးမောင်နှံများထက် ချစ်တင်းနှော၇ာမှာ တယောက်ကို တယောက် စိတ်ပျော်၇ွှင်မှု ပိုပေးနိုင်တာကို ၂၀၁၀ မိသားစု စိတ်ပညာမှတ်တမ်းများမှာေ၇းသားထားပါတယ်။
၄။ အတူနေခြင်းကို နောက်ထားလိုက်တာက မလိုချင်ဘဲ ကိုယ်ဝန်၇ခြင်းကို ဟန့်တားပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅% ကွန်ဒုန်သုံးပြီး အတူနေချစ်သူတွေဟာ ပထမတနှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်၇နိုင်ပါတယ်။
၅။ အတူနေခြင်းက လိင်မှတဆင့် ကူးဆက်တတ်တဲ့ ခုခံအားကျဆင်းေ၇ာဂါ (HIV/ AIDS), ကာလသားေ၇ာဂါစတဲ့ေ၇ာဂါများကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ CDCမှတ်တမ်းများအ၇ အသက် ၁၅-၂၄နှစ်၇ွယ် လူငယ်များဟာ လိင်မှတဆင့် ကူးဆက်တဲ့ေ၇ာဂါမျိုးပေါင်း တ၀က်လောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။
ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းက လိင်မှတဆင့်ကူးဆက်တတ်တဲ့ေ၇ာဂါများကို၇ာနှုံးပြည့်မကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားထားကြပါတယ်။
၆။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူတယောက်က တကယ်ချစ်မချစ်ကို ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ တခုတည်းနဲ့ မတိုင်းတာတတ်ကြပါ။ကိုယ့်ချစ်သူကို လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့လူတယောက်က တဘက်သား၇ဲ့ စံနှုံးတွေကိုပါ စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။
၇။ လက်မထပ်ခင် ကာမ၇ာဂစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြတဲ့ စုံတွဲများဟာ လက်ထပ်ပြီးချိန်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်၇ာ သာယာမှုကို ပေးနိုင်သည့်အပြင် တဦးကိုတဦးနားလည်မှု တန်ဖိုးထားမှုတွေပို၇ှိလာကြောင်း ၂၀၁၀ သုတေသနလေ့လာမှုများကေ၇းသားထားသည်။
First Care Clinic. (2019).7Reasons to Not Have Sex on Valentine’s Day. Accessed 14 February 2019.
← သွေးတိုးခြင်းကို လျော့နည်းစေသည့်ဇင့်ဓာတ်
မိခင်လောင်းများ အာဟာ၇ဓာတ်ဖြည့်ဆေးဝါးများလိုအပ်ခြင်း →